'Kana booda qabsoo Oromoo humni kamiyyuu duubatti hin deebisu' - BBC News Afaan Oromoo
Oromoon baroota dheeraaf gaaffileen gurguddoo kan akka abbaa biyyyummaafi walqixummaa kaasaa tureef wareegama lubbuu itti baasaa turuun yeroo dhihoo keessa sadarkaa murteessaa ta'etti ce'eera.
Mil'uu qabsoo Oromoon amma irratti argamu ilaalchisuun BBC Afaan Oromoo marii karaa feesbuukii kallattiin hordoftoonni gaaffiifi yaada qabaniin irratti hirmaatan Kamisa darbee qopheessee ture.
Ayyoonni mariicharratti hirmaatanis Dr. Milkeessaa Miidhagaa, Dura Ta'aa Biiroo Dargaggootaafi Ispoortii naannoo Oromiyaafi qorataa sirna federaalizimii, Olbaanaa Leellisaa Koree Hojii-raawwachiiftuu Kongirasii Federaalawaa Oromoo irraa fi Kumaa Baqqalaa, Yuunvarsiitii Finfinneetti Qorataa Nageenyaafi Tasgabbiifi kaadhimamaa doktorummaa turan.
Ayyoonni kunneenis 'qabsoo Oromoo kana booda humni kamiyyu duubatti hin deebisu' jedhaniiru.
Sadarkaan amma Oromoon irra gahe kan qabsoo cimaan dhufe ta'u ibsuun kan eegalan Dr. Milkeessaan, "Muummicha ministiraa Dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo (DHDUO) keessaa ta'uuf erga ammas rakkise, paartii mormituuf aangoo qabachuuf baayyee rakkisaadha'' jechuun eegalan.
Waanti baayyeen akka ilaalamu osoo hin taane dinagdeedhaan qabameera, siyaasaanis walxaxeera waan ta'eef hamaa akka ta'e ibsanii, bakka amma irra ga'ame ykn arkaa qabnu kun laayyoo miti jedhan.
Akka Dr. Milkeessaan jedhanitti, Dr. Abiy Ahimad kan gara ministira muummeetti dhufan qabsoo Qeerroofi Oromoon guutummaa gaggeessedha.
Bakki sun murteessaadha, murtee adda addaa taasisuudhaaf, kan hidhamanillee baasuudhaaf, waan hedduu gochuudhaaf dirqama argamuu qaba kan jedhu gaaffii nama hundaa ture waan ta'eef waanti sun dhufee amma bakka ta'erra geenyeerra, jechuun ibsan.
Oromoon guutummaan guutuutti gidiraa keessaa ba'uu qaba
Bakka amma geenye kanaaf, kaayyoo Oromoo bilisummaafi walqixxummaa isa ta'e kanatti caasaa mootummaa keessaas kan itti amane waan dhufeef waltumsuun kun dhufte, jedhan Dr. Milkeessaan.
"Oromoon guutummaan guutuutti gidiraa fi hidhaan irraa dhaabbachuu qaba. Kanaaf, sadarkaa nu hafuti jira."
Ta'us, jijjiiramoota waggoota muraasaan asitti dhufan akka salphaatti ilaaamu akka hinqabaannee dubbatu Obbo Kumaan Baqqalaa
Fakkeenyaaf, qaamoleen siyaasa biroo qabaachuuf biyya isaanii gadhiisanii turan akka biyyatti deebifaman kan taasifame gara laafina mootummaa ADWUI tiin miti, ykn ammoo guddinni siyaasa biyya keenyaa waan dabaleef miti, jedhu Obbo Kumaan. "Jijjiiramni waliigalaatiif waamichi akka dhiyaatuu kan taasise tokkummaa uummata Oromooti."
Obbo Olbaanaan ga'ee Oromoon biyya Itoophiyaa dhaabuufi ijaaruu keessatti qabu gatii lafeefi dhiiga isaa ta'uu yaadatanii, faallaa kanaan Oromoo irrattii kan raawwataamaa ture garuu kan sirna isaa diiguu akka ture ibsan.
…yoo jaallattan dhugaa Oromoorratti deebii'aa jiraadhaa
Oromoon dur jedhan Obbo Olbaanaan; arrabni, qalbiinfi miilli isaas iddoo tokkodha. Waan yaade dubbata, waan dubbate godha. Warri kaan garuu arrabaan waan biraa dubbachaa kan biraa raawwatu.
"Kun ta'uu dinnaan dhaloonni Oromoo har'aa, 'yoo jaallattan dhugaa Oromoorratti deebii'aa jiraadhaa, yoo diddan garuu isin faana hin rakkannuuti dhufe. Kan Qeerroon Oromoo irratti ciche kanadha," jedhan.
Ammas kana qofaan hin dhaabbatu kan jedhan Obbo Olbaanaan, biyyi kun akka ta'utti gaaffii deebiisuun dhugaa badde bakkatti hin deebisuu taannaan, kan kana caalutti deemuu akka danda'u ibsan.
"Kanaafiidha, warri ala jiran, isaan keessa jiraniifi warri mootummaa waliin jiranhundi akka Oromootti yaaduu. Afaan tokkoos kan dubbachuu eegale. Osoo iddoo tokko hin jiraatiin, osoo dhaaba tokko keessa hinjiraatiin waan tokko kan yaaduun dhufe kaanaaf," jedhu.
Rakkoo biraa Oromoo gidduutti uumame sirna isaa diiguu qofa osoo hin taane, amala badaa isaan bira ture Oromoo keessatti ijaaraa turanis jedha Obbo Olbaanaan.
"Kanaaf, amma Oromoo keessatti warra miila lamaafi warra arraba lamaatu baayyatee jira. Isaan kun qabsoon Oromoo akka baccancaruufi sirriitti hin deemne godhaniiru. Haata'u malee, kun osoo kanaan jiruu hanga yoonaatti anaaf qabsoon Oromoo sadarkaa ka'e hundumaattuu mo'ataadha."
Kana booda qabsoo Oromoo humni kamiyyu duubatti hin deebisu
Gaaffii qabsoo Oromoo sadarkaa amma irra ga'erraa kan duubatti deebisu jiraa jedhuuf, waanti duubatti deebisu hin jiru, jedhan Dr. Milkeessaan.
Garuu waanuma ta'e namni gochuu danda'u jiraachuu danda'a ta'a. Akka Dr. Milkeessaatti kun kan uumamuu danda'us yoo Oromoon waldhabe, walirratti duulle qofaadha.
''Kana booda humni kamiyyu qabsoo Oromoo duubatti deebisu kamiyyu hin jiru'' jedhu Obbo Kumaa. Qabsoon kun as ga'ee duubatti hin deebii'u, tarii yoo duubatti deebi'ee kan duubatti deebiisu Oromoodhuma.
Akka Kumaan jedhutti, siyaasa keessatti ilaalcha gara garaa qabaachuun rakkoo hinqabu. Uummata Oromoo guddaa kanaaf, paartii siyaasaa tokko qofatu barbaachisa jechuun dogoggora. Paartii lama ykn sadii qabaachuun ni danda'ama.
"Paartii gara garaa qabaachuun Oromoon adda baheeraa, garuu diigameera jechuu miti. Uummanni Oromoo faayidaa waloo isaa adda baafatee yoo deeme, qabsoon as gahe kun kan duubatti deebii'u miti," jedhan Obbo Kumaa Baqqalaa.
Gareen IS haleellaa mana hidhaa Afgaanistaanirratti raawwatameef gaafatamummaa fudhate
"Gaa'elakoo keessatti akkan garba ta'etti natti dhaga'ama ture"
Manni Maree Federeeshinii filannoo Tigraay dhaabsisuu danda'aa?
Yadni 'Piraamidoonni uumama hawaarra jiraataniin ijaarame' jedhu Masirrii mufachiise